Top 10 ngwa iji mee echiche echiche | Gam akporosis
Top 10 Apps ka Concept Maps
Ignacio Sala | 16/07/2021 18:00 | Ngwa gam akporo
Ojiji nke ekwentị abawanyela n'ụzọ dị ukwuu ma e jiri ya tụnyere kọmputa Omenala na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụ ezie na ọ ga-ebu oria coronavirus iji gosi na kọmputa enweghị ike iji ekwentị dochie ya. N'oge ahụ, ahịa kọmputa na mbadamba nkume rịrị elu mgbe ahịa ama ama jụrụ.
Thishapụ nke a pequeño ịkọwapụta, nke a bụ otu n'ime ihe ndị na - eme ka ndị mmepe ghara ịkwụsị nzọ na gburugburu ebe obibi, ịbụ ngwa nke maapụ uche otu n'ime ọtụtụ. N'ezie, ngwa eserese nke uche pụtara ihe niile kwa ụbọchị na Playlọ Ahịa Google.
Site na ọtụtụ nhọrọ, ọ na-esiwanye ike ịhụ ụdị ngwa dị mma na nke adịghị mma. Yabụ na ị nwere ike ịhọrọ nke bụ ngwa eserese uche nke kachasị mma maka mkpa gị, site na Androidsis anyị mepụtara ndepụta yana 10 kacha mma n'uche nkewa ngwa maka gam akporo.
1 Mind Map: Akpukpo Eziokwu
6 N'ime uche
7 MindMapper Gaa
Mind Map: Akpukpo Eziokwu
Anyị na-amalite mkpokọta a na ngwa dị iche na nke anyị na-emebu, ebe ọ na-enye anyị ohere ị nweta ọtụtụ ihe Google's Augmented Reality platform (ARCore) to mepụta 3D uche map na on ma ọ bụ na-akpụ akpụ oyiyi.
Freedị Mind nke Mind na-enye anyị ohere itinye faịlụ, tinye hyperlinks, tinye faịlụ site na ọrụ nchekwa, kpọọ vidiyo na audios, gbasaa ma daa akụkụ ... Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbakwunye ọnụ ọgụgụ na-akparaghị ókè nke mgbọrọgwụ, hyperlinks na-akparaghị ókè, mmegharị ọnụ na ọtụtụ karịa, anyị ga-agafe igbe ahụ.
Ka m kwuru na paragraf bu ụzọ, Mind Map dị maka gị budata n'efu, mbipute nke gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ n'ime ngwa iji wepu mgbasa ozi ma mepee ohere ịnweta ọrụ niile nke ngwa ahụ na-enye.
Iji jiri ngwa a, a ga-ejikwa ngwaọrụ anyị jikwaa ya gam akporo 7.0 (opekempe nke ARCore dakọtara na).
Mind Map: AR - ARCore na Eziokwu gbara ume
Developer: Ihe mgbapụ
Mindomo bu ihe eji eme uche nke uche di na kọmputa nwere nsụgharị maka gam akporo. Ọ nwere nnukwu atụmatụ na atụmatụ na-enye ndị ọrụ ohere ịnweta ike nke nsụgharị desktọọpụ n'ọbụ aka ha.
O nwere otutu nhọrọ di iche iche dika ndebiri, mmekorita ihe nkesa na oru mbupu faịlụ, na-arụ ọrụ ọbụlagodi na enweghị njikọ ịntanetị, gụnyere atụmatụ mmekorita n'ịntanetị nke na-enye ndị ọrụ ohere ịkekọrịta map ha na ndị ọzọ ma dezie ya n'otu oge.
Mindomo bu ngwa anyi nwere ike budata n'efu Site na Storelọ Ahịa Play, ọ nweghị mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụrụ ihe n'ime ngwa ma chọọ gam akporo 6.0 ma ọ bụ karịa.
Mindomo (map di iche)
Developer: Ọkachamara Software ngwa Srl
GitMind bụ otu n'ime ngwaọrụ kachasị baa uru maka ndị ọrụ gam akporo n'ihi na ndị ọrụ nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na nhazi nke uche ha ozugbo ị wụnye ngwa a Ọ bụghị iwu na ị ga-edebanye na ngwa ahụ iji nwee ike iji ya.
N'agbanyeghị nnwere onwe, anaghị agụnye mgbasa ozi iwe mgbe anyị na-arụ ọrụ na ngwa, nke bụ nnukwu enyemaka maka ndị nwere obere akụ na ụba. Na mgbakwunye, ọ gụnyere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri, ndebiri nke ga-enyere aka na ọrụ nke ịmepụta maapụ uche anyị ọsọ ọsọ na mfe.
Abia n’ihe ikesa ibe anyi uche anyi na ndi ozo, anyi nwere ike ime ya site na URL, nke enwere ike inweta ya na brauza obula. GitMind dị maka gị budata n'efuỌ nweghị mgbasa ozi mana enweghị ụdị ịzụrụ ihe n'ime ngwa.
GitMind - Mind Maps na Maapụ Echiche
Developer: ANYANWU OSO
Coogle bụ ihe ntanetị ọzọ maka ịmepụta maapụ uche dị na kọmputa dịkwa na ụdị ngwa gam akporo, nke na-enye anyị ohere gaa n'ihu na map nke anyị ebe ọ bụla
Na-enye dị iche iche atụmatụ, dị ka ezigbo oge mmekota, nkwado ahịa na ndebiri n'efu. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ịkekọrịta ọrụ anyị ozugbo site na URL nwere ike ịnweta site na ihe nchọgharị ọ bụla.
Ruru ya magburu onwe atụmatụ, anyị nwere ike ikwu na ọ bụ onye nke kasị mma uche nkewa ngwa maka gam akporo, ihe ngwa na anyị nwere ike budata n’efu, enweghị mgbasa ozi ma ọ bụ nzụta ngwa ma chọọ gam akporo 6.0 ma ọ bụ karịa.
Developer: Igwe mmiri
miMind na-enye anyị, n'etiti atụmatụ ndị ọzọ, mbubata igwe ojii, akpaka ịzọpụta na ụzọ ọpụpụ, wepụta akwụkwọ ndabere faịlụ gị na ọrụ nchekwa igwe ojii dị ka Google Drive na Dropbox na mgbakwunye na ịnye anyị ọtụtụ ndebiri n'efu.
Enweghị manụ na mgbasa ozi ọ chọghị ndebanye aha na ngwa ahụ iji ya. Anyị nwere ike ịsị na nke a bụ ngwa ọrụ bara uru ma baa uru maka ngwa gam akporo na-enweghị atụ ụjọ na ị ga-ezighi ezi.
miMind dị maka gị budata n'efuỌ na-agụnye mgbasa ozi ma ọ bụrụ na ịzụrụ na-ngwa kpọghee ohere niile ọrụ na ọ na-enye anyị. Opekempe nke gam akporo dakọtara na ngwa a bụ Android 5.0.
miMind - mfe Mind
Uche kwesiri itinye ya na ndepụta a n'ihi nhọrọ nchekwa ya maka faịlụ ya nke na-enye ndị ọrụ ohere okwuntughe chedo map obi gị iji debe ha nzuzo ma ọ bụ belata ndị nwere ike ịhụ ihe ngosi ahụ.
Ngwa a na - ejikọtaghị nke ọma na ọtụtụ ọrụ nchekwa igwe ojii na ọ na-wuru dị ka visual clipboard na-enyere mfe mmụta nke usoro nke a n'uche nkewa ngwa maka gam akporo.
Anyị nwere ike iji Uche Enweghị njikọ ịntanetị, ya mere, ọ bụ nhọrọ dị egwu ịtụle mgbe ị na-edetu na njem anyị. Ngwa a dị maka nbudata n'efu, ọ naghị etinye mgbasa ozi mana ọ na-eme in-app ịzụrụ ị kpọghee ekwt niile atụmatụ.
Mara (uche nkewa)
Nke a bụ ụdị mkpanaka nke ngwanrọ MindManager dị na kọmputa. N'ime ụdị a maka ngwaọrụ gam akporo, anyị nwere ohere ị nweta ọtụtụ ọrụ na atụmatụ ndị dị dị na desktọọpụ version. Ọ bụ ezie na ọ bụ obere ụdị nke desktọọpụ nsụgharị, MindManager Go nwere nanị atụmatụ akpọrọ MindManager Snap.
Ihe omume a na enye ndi oru ohere were nseta ihuenyo ma mesịa kesaa ha na nsụgharị kọmputa. Na mgbakwunye, ọ na-enye anyị ohere ibupụ maapụ uche na ngwaọrụ gam akporo anyị n'ụdị dị iche iche.
MindManager Go dị maka gị budata n'efu, anaghị agụnye mgbasa ozi ma ọ bụ ịzụrụ ihe n'ime ngwa chọrọ Android 5.1 ma ọ bụ mgbe e mesịrị.
MindMeister bu ezigbo ihe eji aputa ihe ederede na ngwa gam akporo gi. Zuru oke kachasị maka ama na mbadamba nkume maka nhazi ederede zuru oke ma dị mfe. Ikike ịdọrọ na dobe iji dezie eserese uche bụ otu n'ime isi ihe nkiri ya yana ọrụ mmekọrịta, yana ọnọdụ ngosi.
Na-enye anyị ohere maapụ uche maapụ na usoro Okwu na PowerPoint. Ebe ọ bụ na nke a abụghị sọftụwia uche maka sọftụwia maka gam akporo, ị ga-enwe nhọrọ ịdenye aha na atụmatụ Pro, ebe ị ga-emeghe ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya nke ngwa ahụ.
MindMeister dị maka nbudata n'efu, ọ naghị etinye mgbasa ozi mana ọ na-eme in-app ịzụrụ n'ụdị nke ndenye aha, yabụ ọ bụrụ naanị na ịchọrọ ịme otu ugwo na ngwa nke ụdị a ma chefuo maka ịkwụ ụgwọ n'ọdịnihu, nhọrọ nke MindMeister na-enye anyị abụghị ihe ị na-achọ.
Gloow bụ otu n'ime nhọrọ ndị kachasị ewu ewu na ngwaọrụ desktọọpụ uche. Ekele maka ihe ịga nke ọma a, ngwa a dịkwa na ekwentị mkpanaaka site na ngwa. Otu n'ime ihe kpatara ihe ịga nke ọma ya dabeere na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndebiri dị mma ọ na-enye anyị na ahụmịhe mara mma na ngwaọrụ mkpanaka.
E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike rụọ ọrụ na-enweghị data na ọrụ ịntanetị. Mmekọrịta ịntanetị bụ ihe ọzọ na-atọ ụtọ nke ngwa ahụ yana ikike ibupụ maapụ uche na usoro ndị ọzọ. E nwekwara eziokwu na ha nwere ike itinye ihe oyiyi na eserese iji nwekwuo nkenke ma mee ka map mara mma mara mma.
Ihe ndị a bụ ụfọdụ n’ime ihe kpatara Gloow ji bụrụ otu n’ime ngwa ọdịnala kachasị mma maka gam akporo na i nwere ike iji. Dị ka nke gara aga n'elu, Gloow dị maka nke gị budata n'efuta ma gunyere nzụta ngwa iji kpọghee ohere niile.
Mind Maps & Concepts Maps: Ebube
Developer: Nebulae GCV
DoUnmind bụ ngwa a na-ewu ewu karịa nke gara aga, ma ọ naghị adaba na ọrụ. doUmind na-enye anyị atụmatụ 8 na paịlị agba nke agba 21 iji hazie maapụ uche anyị kachasị. E nwekwara ọrụ nke mbupụ na-enye gị ohere ịmeghe faịlụ na ngwa ndị ọzọ dị ka PowerPoint, MindManager n'etiti ndị ọzọ.
La mmekorita n'ịntanetị bu ihe ozo n’ime oru a dikwa na ngwa a. doUmind dị maka gị budata n'efu, gụnyere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe n'ime ngwa iji kpọghee atụmatụ niile ọ na-enye anyị ma chọọ gam akporo 5.0 ma ọ bụ karịa
doUmind - Uche map nyocha
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Top 10 Apps ka Concept Maps
Egwuregwu Harry Potter kachasị mma na gam akporo
Ngwa 5 kachasị mma iji ree ihe